Return to Ciraaq
Kabista siismada ah ee dib u noqosho ee Ciraaq waa kuwan:
ETTC. VluchtelingenWerk waxay wada shaqeeyaan Ciraaq kula leeyihiin hey’adda Xaruunta Yurub ee Tababarrada iyo Teknologiyada ETTC (European Technology and Training Centre). ETTC waxa ay hagtaa dadka reer Ciraaq oo dib u soo noqday (shaqsi iyo qooysba) si ay nolol cusub u abuurtaan. Iyaga ayaa dadka dib u soo noqday ku qaabilaaya degada diyaaradaha, ku caawinaaya baadi goobka hooy (ku meel gaar ah) waxa ayna ku garabgalayaan sidii ay u sameyn lahayeen shirkad yar ama ay shaqo u heli lahaayeen. Waxa ay kaloo kaa caawini karaan helista xirfad- ama wax-barashada, shax xiriiro oo wax gal ah, waxa ayna dadka u baahn u gudbin karaan hey’adaha caafimaadka. VluchtelingenWerk waxa ay la xiriireysaa ilaa sannad dib u noqoshada keddib hey’adda lammaanaha la ah si ay ula socdaan sida xaladdaada ay noqotay.
Haddii aad garabgalka IOM xulatay, waxaa ku caawinaaya shaqaalaha Xafiiska-IOM ee Ciraaq sida aad u bixineyso lacagta-dabiicga ah. Taasi inta ay tahay waxaad u adeegsan kartaa tusaale ahaan kiro, barasho xirfad, tababar, iibka shirkad iwlm.